Kwifektri Yokuvikela Umlilo, Abahlinzeki - China Kwabakhiqizi Bokuvikela Umlilo
Nail-in Ngocingo nge Rubber
Njengenye yezinkampani ezilenga kakhulu ukuncintisana, izibopho zethu zezipikili ezinerabha zisetshenziselwa ukukhweza amapayipi ezindongeni, ophahleni naphansi. Futhi bathole ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eYurophu, Middle East nase-Asia. Futhi, indawo yokuxhumana yesiyingi esingenhla nesingezansi inama-gaskets amabili epulasitiki ngaphakathi.
Pipe Adjustable Assembly Ukusekela
Njengenye yeziphanyeko ezincintisana kakhulu zenkampani, inhlangano yethu yokusekela ipayipi eguquguqukayo yenzelwe ukuxhasa ipayipi evundlile kusuka kuma-stanchions lapho kudingeka khona ukulungiswa mpo. Futhi ithole ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eNyakatho Melika, eNingizimu Melika, eMpumalanga Ephakathi nase-Asia. Futhi, kukhona izindlela zokwelapha ezihlukile ongakhetha kuzo: Oku-lashukumisa kwangaphambili, i-Zinc, i-epoxy no-Green galvanized kumaliza ukuhlangabezana nezidingo zakho zokulwa nokugqwala kwamazinga ahlukene.
Umoya Steel Pipe Ngocingo nge EPDM Rubber Lining
Njengezinye iziphanyeko ezincintisana kakhulu zenkampani, izibopho zethu zamapayipi wensimbi zomoya ezinolwelwesi lwenjoloba lwe-EPDM zenzelwe ngocingo olunezingxenye ezimbili olunamabhawodi okhiye amabili. Futhi bathole ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eYurophu nase-Asia. Futhi, ulwelwesi lwenjoloba lwe-EPDM lusetshenziselwa ukuvimbela umsindo.